MacOS Sierra: Top Five Things You Need to Know About Apple's New Mac Software - News Fitsipika
Six tsara indrindra Wi-Fi Mpandahateny	MacOS Sierra: Top dimy Zavatra Tsara ho Fantatrao Momba ny New Apple Mac Software
Siri tany amin'ny Mac, afaka maka zavatra izao eo amin'ny samy hafa Mac sy ny iOS fitaovana, ny biraonao ankehitriny mipetraka any amin'ny rahona - sy ny zava-drehetra azo tabbed
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “MacOS Sierra: ambony zavatra dimy tokony ho fantatrao momba ny Apple Mac rindrambaiko vaovao” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com tamin'ny Talata 20 Septambra 2016 13.32 UTC
OS X efa maty. Ho ela velona macOS. Apple ny vaovao dikan-ny Mac rafitra miasa - Sierra - dia ho Azo alaina taty aoriana amin'izao fotoana izao.
Ny maimaim-poana ho an'ny fanavaozana tsy ampy Mac efa misy amin'ny teny 2009 ary dia ho hita amin'ny alalan'ny ny Mac App Store tatỳ aoriana amin'izao fotoana izao. Raha mety ny sasany te-hihazona eny avy hatrany fanavaozana, nomena ny olana amin'ny tany am-boalohany vao haingana ny vaovao farany, eto dia dimy zava-baovao ho hita 'ireo izay maniry ny hiova ho macOS Sierra.
Siri io dia azo jerena eo amin'ny biraonao na ny solosaina findainy. Sary: Paoma
Ny lehibe indrindra Sierra fiovana ho an'ny hafa noho ny anarana hoe Siri. Ilay feo teo ihany mpanampy avy amin'ny iPhone sy ny iPad dia izao ny Mac mitovy endri-javatra sy ny fahadisoan'ny. Afaka mahita antontan-taratasy ho anao mampiasa teny toy ny nampidirina voajanahary amin'ny El Capitan, voatendry fanendrena, hanamarina Tsipelina, hilalao mozika sy hilaza aminareo ny toetr'andro, fa tena no mampiasa azy io miankina amin'ny toerana miasa: mpiara-miasa ao amin'ny birao misokatra-drafitra ny tsy ho tia ny zava-misy fa vao nanomboka niresaka ao amin'ny solosaina.
2. Universal hela-tsilaka
Universal hela-tsilaka midika hoe afaka maka amin'ny milina iray ary apetaho amin'ny hafa nefa tsy handefa misy antontan-taratasy na ny fifandraisana eo amin'ny roa. Sary: Paoma
Efa te apetaho zavatra roa Macs na ny Mac sy ny iPhone na iPad? Ary azonao atao. Handika fotsiny zavatra iray milina, voa Mametaka amin'ny hafa sy miandry. Indraindray mitaky elaela, arakaraka ny fomba tsara ny fifandraisana dia, fa mahagaga miasa tsara. Tsy miasa ho an'ny lahatsoratra, sary sy ny ankamaroan'ny zavatra hafa mety dika mitovy any amin'ny hela-tsilaka.
3. iCloud fiara biraonao
iCloud Drive mpitondra ny antontan-taratasy rehetra eo amin'ny biraonao eo amin'ny milina. Sary: Paoma
Raha ny sasany dia voalamina sy mitahiry ny antontan-taratasy rehetra ao amin'ny lahatahiry voalamina tsara, maro fotsiny ny zava-drehetra eo amin'ny biraonao dumped sy mihidy amin'ny milina iray. iCloud Drive Desktop afaka fampitahana matetika antontan-taratasy sy ny lahatahiry eo amin'ny biraonao eo amin'ny milina sy ny iPhones na iPads, izany zava-drehetra tsy voalamina dia tsy ho azo avy amin'ny maro milina.
4. Ny zava-drehetra ao kiheba izao
View antontan-taratasy sy ny maro hafa-baravarankely fampiharana in tabbed View, tahaka ny mijery ny lahatsary hafahafa ny ambony tamin'izany andro izany miaraka amin'ny sary-in-sary Display. Sary: Paoma
Ny tabbed kickstarted interface tsara ny navigateur izao tonga mihoatra na latsaka ny zava-drehetra ao Sierra. Avy lahatsoratra mpamoaka lahatsoratra amin'ny sary nanova, tetibola fampiharana sy ny mailaka, mikapoka ny "mampiray Windows rehetra" safidy ambanin'ny Window mampilatsaka ao amin'ny sata barany merges ny varavarankely iray fampiharana ho iray tabbed interface tsara. Tsy ny zavatra rehetra manohana azy io avy hatrany, ary ny sasany izay manana antsasaky-mofo implementations, fa raha te vakizoro na aiza na aiza amin'ny Mac, ankehitriny ny ny vintana.
5. Apple Pay, iOS 10 endri-javatra sy ny maro hafa
Hijery ny fahatsiarovana ao anatin'ny-tsary. Sary: Paoma
Ankoatra ny endri-javatra lehibe Mac, MacOS Sierra ihany koa ny manampy mifanentana amin'ny ankamaroan'ireo endri-javatra vaovao avy amin'ny iOS 10. Ankehitriny ianao dia afaka mandoa ny zavatra mampiasa ny Touch ID sensor eo amin'ny iPhone amin'ny aterineto, azonao alefa amin'ny chat mihaja izany zavatra iOS 10 mpampiasa in Messages, Hijery horonan-tsary ampiasaina araka ny Quicktime Player ao amin'ny mitsingevana varavarankely, ary na dia mamoha ny Mac mampiasa ny Apple Watch, raha manana iray. Apple Music in iTunes izao mijery bebe kokoa tahaka ny iOS Version koa, ary ny Fahatsiarovana mampiseho avy amin'ny iOS-tsary fampiharana ankehitriny ao amin'ny MacOS Sierra Photos fampiharana. MacOS Mampanantena koa mba hanafaka ny misy toerana malalaka eo amin'ny Mac amin'ny mitahiry rakitra maromaro ao anatin'ny fiara iCloud, Ahoana anefa no toerana be izany afaka manafaka ny Miankina amin'ny inona no karazana antontan-taratasy no maka ny fiara mafy.
iOS 10: an-tampon'ny 10 ny zavatra tokony ho fantatrao momba ny Apple ny iPhone sy ny iPad vaovao rindrambaiko
Amazon Kindle Paperwhite 2015 famerenana: ny sharpest ...
Peter	Sep 21, 2016	Post Fikarohana
← Apple Manambara tantera-drano iPhone 7
BlackBerry mba Tsy fanaovana telefaonina ! →
29898	Misotro Coffee Mety Ahenao Mamono Tena Risk!
23737	5 Fomba hanazava Up ny Bedroom
29181	Amboadia’ Midradradradra Azo ID'd ny Computer
27325	Ny volamena Apple iPhone 5S mbola nandinika filaharam-be tany Londres
25072	Best Deals!	Recent Articles	Amazon Fire TV Hazokely Review: Cheap, Lehibe TV Streaming Device
Feb 4, 2017	Nintendo Switch: Inona no miandry izahay avy amin'ny New Console
Jan 21, 2017	No Fotoana Ampifamadiho ny Mac noho ny amin'ny Windows Laptop?
Jan 9, 2017	© 2017 Copyright Newsrule.com	Pin It amin'ny Pinterest